Fanadinana bakalorea Mpanao « Gym » 10 no bevohoka
Miisa 6000 ireo mpiadina lahy sy vavy miatrika ny adina ara-panatanjahantena Bakalorea eny amin’ny kianjan’Alarobia nanomboka ny alatsinainy teo.
Nizotra tamim-pilaminana izany tamin’ny ankapobeny saingy na izany aza nisy ihany ny indro kely.Mpiadina manodidina ny 10 mantsy hatreto no fantatra fa nitondra vohoka. Nisy tamin’ireo tovovavy ireo no tsy nahafantatra akory fa nitondra vohoka hoy ny tompon’andraikitra. Torana teo am-pihazakazahana moa ny sasany tamin’izy ireo. Nisy mpiadina 10 hafa ihany koa teny amin’ny ANS Ampefiloha no hita fa tsy salama tampoka ary 20 hafa no voatery nivadika nanao “théorie”